HALATRA LAVANILY ANY SAMBAVA : Mampitandrina ny depiote Jack
Manoloana ny firongatry ny halatra lavanily manta tsy matoy any amin’ny distrikan’i Sambava sy ny manodidina dia nampitandrina ireo mpangalatra sy mpividy vokatra halatra ny solombavambahoaka voafidy any an-toerana. 11 janvier 2018
Mamangy Norbert fantatry ny maro amin’ ny anarambositra hoe Jack nandritra ny valan-dresaka nataony rehefa nivahiny tao amin’ny onjam-peo « Vanille » ny herinandro teo. Mirongatra tokoa ny halatra lavanila manta sy tsy matoy ao amin’ny distrikan’i Sambava.
Vao tsy ela akory ny talata teo, ohatra, nahatratra mpangalatra lavanila tsy matoy iray ny mponina tao Ambohisatrana faharoa fa tafaporitsaka ity farany. Ny lavanila nangalariny kosa tavela tao an-toerana. Hentitra ny depiote Jack tamin’ny kabary nataony ary nilaza ny lehilahy fa hanao izay ho afany mba hisamborana ireo mpandraharaha mpividy lavanila halatra ireo izay efa fantapantany ny sasany, hoy hatrany izy.
Na izany na tsy izany tsy nanaitra ireo tompon’andraikitra ao amin’ny sendikan’ny mpamboly lavanily sasany any Sambava ny fanambaràna nataon’ny depiote Jack. Amin’izy ireo fandrebirebena saim-bahoaka no ataon’ity farany. « Taiza no misy an’ny depiote Jack hatrizay nisian’ny halatra lavanila izay teto Sambava ka tsy niteny tahaka ny nataony farany teo ?
Na izy aza tsy dia marisika mandray anjara amin’ny fivoriana ataon’ny sendikan’ny mpamboly lavanila. Tsy afaka miady amin’ny firongatry ny halatra lavanila izany izy raha tsy miara-miasa amin’ny plate-forme sy sendikan’ny lavanila », hoy ny filohan’ny sendikan’ny mpamboly lavanila iray any amin’ny faritra Sava. « Sa efa akaiky ny fifidianana ka mitady fomba hazahoana ny fon’ny vahoaka fa indrindra ny tantsaha indray ? Sanatria tsy mankahala an’ny depiote Jack ny tenako fa tanora ny tenany ka tsy tokony manaraka fomba ratsy ataon’ny mpanao politika sasany fa indrindra ireo amin’ny fitondrana ankehitriny », hoy izy hatrany. « Trafonkena ome-mahery ka am-bava homana am-po mieritreritra », hoy izy farany.
Pounie sy A.Lepêcheur